नेप्सेद्वारा ६ कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कुनको कति तोक्यो ? - Arthatantra.com
नेप्सेद्वारा ६ कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कुनको कति तोक्यो ?
काठमाडौं । सोमवार आधा दर्जन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । उक्त दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले ६ कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो ।
नेप्सेले हिमालयन बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, मिथिला लघुवित्त, मिर्मिरे लघुवित्त र कालिका पावर कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजन गरेको हो ।
नेप्सेले हिमालयन बैंकको २१.३८ प्रतिशत बोनस सेयरको समायोजनपछि ३९८ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकेको छ । बैंकको अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् आइतवार कायम अन्तिम सेयर मूल्य ४८४ रुपैयाँको आधारमा समायोजन भएको हो ।
सोमबार नेप्सेले सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको ५.७५ प्रतिशत बोनस सेयरको समायोजनपछि २२६ रुपैयाँ तोकेको छ । नेप्सेले अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात आइतबार कायम अन्तिम सेयर मूल्य २३९ रुपैयाँको आधारमा समायोजन गरेको हो ।
त्यस्तै, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको ७ प्रतिशत बोनस सेयरको समायोजनपछि ३३१ रुपैयाँ ६८ पैसा निर्धारण भएको छ । नेप्सेले आइतवार कायम अन्तिम सेयर मूल्य ३५४ रुपैयाँ ९० पैसाको आधारमा समायोजन गरेको हो ।
त्यसैगरि नेप्सेले मिथिला लघुवित्तको २५ प्रतिशत बोनस सेयरको समायो १ हजार ५६७ रुपैयाँ २० पैसा तोकेको छ । कम्पनीको अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् आइतवार कायम अन्तिम सेयर मूल्य १ हजार ९५९ रुपैयाँको आधारमा समायोजन भएको हो ।
यता, मिर्मिरे लघुवित्तको २० प्रतिशत बोनस सेयरको समायोजनपछि १ हजार २९५ रुपैयाँ ८३ पैसा निर्धारण गरेको छ । कम्पनीको आइतवार कायम अन्तिम सेयर मूल्य १ हजार ५५५ रुपैयाँको आधारमा समायोजन भएको हो ।
नेप्सेले कालिका पावरको १५ प्रतिशत बोनस सेयरको समायोजनपछि ४५० रुपैयाँ ४३ पैसा तोकेको छ । नेप्सेले अघिल्लो कारोबार दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा समायोजन गरेको हो । आइतवार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ५१८ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो ।
वि.सं.२०७८ पुस १९ सोमवार १०:५५ मा प्रकाशित
News Views: 442
अघिल्लाे दक्षिण कोरियामा हुने अधिकांश आगलागीमा बिराला दोषी
पछिल्लाे घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, आज प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार ?